သိထားသင့်သော native speaker များသုံးသည့် idiom များ - Myanmar Network
သိထားသင့်သော native speaker များသုံးသည့် idiom များ
Posted by Soe Soe Win on June 3, 2015 at 14:08 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် သုံးစွဲလာခဲ့သောသူများဟာ အီဒီယမ်များနှင့် အီဒီယမ်ဆန်သော အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ထိုအသုံးအနှုန်းများဟာ နည်းနည်းရှုပ်ထွေးခဲ့ပေမယ့် အမြဲထိတွေ့နေမှုကြောင့် ၄င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုမိုနားလည်လာရုံမကပဲ မိမိကိုယ်တိုင်သုံးပြီး စကားလုံးများထဲသို့တောင် ထည့်သွင်းသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ သင်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ယူနေလျက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ အီဒီယမ်တွေကို ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကို သေသေချာချာနားလည်ချင်မှ နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ native speaker များနဲ့ ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ မကြာခဏကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အီဒီယမ်များကို အောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ A chip on your shoulder (ပခုံးပေါ်ကအပဲ့လေး)
To haveachip on one’s shoulder ဆိုတာကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်က အတိတ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အညိုးအတေး (သို့) မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခုရှိနေတာကိုပြောတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ငယ်ငယ်တုန်းက မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့ စိတ်ဒဏ်ရာရနေတာမျိုး၊ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုကြောင့် အငြိုးရှိတာမျိုးပါ။
Bert သည် သူ၏ စကားဝဲသံကြောင့် အမြဲစိတ်သိမ်ငယ်နေတတ်ခဲ့သည်။
၂။ Bite off more than you can chew (၀ါးနိုင်တာထက်ပိုကိုက်ခြင်း)
အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကို ခပ်ကြီးကြီး တစ်ကိုက်ကိုက်လိုက်တဲ့အခါ ပါးစပ်တစ်ခုလုံးပြည့်သွားပြီးတော့ မေးရိုးတွေတောင် မလှုပ်နိုင်တော့သလိုမျိုးပေါ့။ ဒီ အီဒီယမ်ကတော့ ကိုယ် ပြီမြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တာ ထက်ပိုပြီး တာဝန်ယူထားတာကိုပြောချင်တာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ကတော့ တစ်ပါတ်အတွင်းမှာ ဝက်ဗ်ဆိုဒ် ၁၀ ခု ကိုပြီးအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ တကယ်တမ်းတော့ သင်လုပ်နိုင်တာက ၅ ခုပဲလေ။
E.g. Are you sure you haven’t bitten off more than you can chew with this job?
ဒီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းလုပ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး လက်ခံလိုက်မိပြီလို့ မထင်ဘူးလား။
၃။ You can’t take it with you (ကိုယ်နှင့်အတူယူသွား၍မရနိုင်ပါ)
သုံးနိုင်တုန်း သုံးထားလိုက်၊ စားနိုင်တုန်းစားထားလိုက် ဆိုသည့် သဘောဖြစ်ပါသည်။ သင်သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ဘာကိုမှ သင်နှင့်သယ်သွားလို့မရနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် မိမိပိုင်ပစ္စည်းတွေကို တောင်ပုံယာပုံ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ ထူးမြတ်တဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာမှ ထုတ်သုံးတာကလွဲလို့ ကျန်အချိန်များမှာ သိမ်းထားခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ပါနဲ့။ အခုအခါမှာ ဘ၀ကိုဇိမ်ကျကျနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ။ သင်လောကကြီး ထဲကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သင့်ပစ္စည်းတွေက အကြာကြီး ဆက်ပြီးကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ်ပါသည်ဟု ဆိုလိုသည့်အခါ "you can't take it with you" ကို သုံးနိုင်ပါသည်။
E.g. Enjoy material things while you're alive, you can't take it with you.
ငွေတွေ ပစ္စည်းတွေကို သင် အသက်ရှင်နေစဉ် သုံးစွဲစည်းစိမ်ခံစားပါ။ သေရင် သင့်နောက်ပါလာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
၄။ Everything but the kitchen sink (မီးဖိုချောင်လက်ဆေးကန်မှလွဲ၍)
အကုန်လုံးနီးပါးထုပ်ပိုးပြီး/ယူသွားပြီး/ရွှေ့ပြောင်းပြီး ဖြစ်တယ်။ အားလုံးနီးပါးလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ယောက်ယောက်က “The thieves stole everything but the kitchen sink!” လို့ပြောရင် သူခိုးတွေကဟာ သယ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းမှန်သမျှကို တက်တက်ပြောင်အောင်ခိုးသွားတယ်”လို့ပြောတာပါ။ လက်ဆေးကန်ကတော့ ဖြုတ်ပြီးသယ်သွားဖို့ရာခက်တယ်လေ။ ''တစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီး''လို့လဲအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
E.g. We're only going on vacation foraweek, but John will insist on taking everything but the kitchen sink.
ငါတို့က တစ်ပတ်ပဲ အပျော်ခရီးထွက်မှာကို John က ပစ္စည်းရှိသမျှ အကုန်လုံးပါ သယ်သွားချင်နေလေရဲ့။
၅။ Over my dead body (သေနေတဲ့ ငါ့ကိုယ်ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်က)
ကိစ္စတစ်ခုခုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်သော သဘောကိုဆောင်ပါတယ်။ မြန်မာစကားတွင် “ငါသေမှလုပ်” ဟူသော စကားနှင့် နီးစပ်ပါသည်။
E.g. Joe says he's going to buyamotorbike.
Joe က ဆိုင်ကယ်ဝယ်စီးမယ်ပြောနေတယ်။
၆။ Tie the knot (လက်ထပ်သည်)
တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် "အထုံးထုံးတယ်" လို့ ဆိုလိုပေမဲ့ တကယ့် အဓိပ္ပါယ်က “လက်ထပ်တယ်” လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါသည်။ ဒီစကားကတော့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာဖြစ်တဲ့ “handfasting” (လက်များချည်နှောင်ခြင်း) ဆိုတဲ့စကားက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ အချိန်မှာ သတို့သားနှင့် သတို့ သမီးတို့၏ လက်တွေကို အတူတူဖဲကြိုးနဲ့ချည်နှောင်ပြီး “သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဘ၀တွေဟာ ထာဝရချည်နှောင်ပြီး သွားပြီ” ဆိုတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
E.g. So when are you two going to tie the knot?
ကဲ ဒီတော့ မင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့ မင်္ဂလာဆောင်ကြမှာလဲ။
၇။ Don’t judgeabook by its cover (စာအုပ်ကို အဖုံးကြည့်ပြီး အကဲမဖြတ်ပါနှင့်)
တစ်စုံတစ်ယောက် (သို့) တစ်စုံတစ်ခုကို အပေါ်ယံ အမြင်မျှနဲ့ အတွင်းသဏ္ဍာန်၊ အရည်အသွေးကို မှန်းဆလို့ မရကြောင်း ဆိုလိုပါတယ်။ မြန်မာစကားပုံ အပွေးမြင် အပင်သိဆိုတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
E.g. She doesn't look very intelligent, but you can't judgeabook by its cover.
သူ့ကို ကြည့်ရတာတော့ သိပ်တော်ပုံမရဘူး ဒါပေမဲ့ အမြင်နဲ့တော့ ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေ။
၈။ When pigs fly (၀က်တွေပျံသန်းသောအခါ)
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ဘယ်သောအခါမှ” ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ အတောင်ပေါက်ပြီး ပျံသန်းမှာမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် မိဘတစ်ဦးက သူ့ကလေးတစ်ယောက်ယောက်ကို “၀က်တွေပျံသန်းတဲ့အခါမှ မင်းနဖူးမှာ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခွင့်ပြုမယ်” လို့ပြောတာက “ဒီကိစ္စကတော့ ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူ” လို့ ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။
E.g. I'll have finished it by tomorrow.
၉။ Leopard can’t change his spots (ကျားသစ်က သူ့ခန္ဒာကိုယ်ကအပြောက်တွေကို ပြောင်းပစ်လို့ မရပါ)
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “သင်ဟာသင်ပါပဲ”လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ကျားသစ်တစ်ကောင်ဟာ ဘယ်လိုမှ သူ့ရဲ့အရေပြားကပုံစံကို ပြောင်းလဲမရနိုင်သလိုပဲ လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ကလည်း ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲမရနိုင်ပါ။ မြန်မာစကားပုံ ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်နဲ့ ဆင်ပါတယ်။
E.g. I doubt this punishment has made Chris learn his lesson. A leopard will never change its spots.
ဒီလို ဒာဏ်ပေးတာက Chris ကို သင်ခန်းစာရစေမယ်တော့မထင်ပါဘူး။ ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်ပဲလေ။
၁၀။ Bite your tongue! (ကိုယ့်လျှာကိုယ်ပြန်ကိုက်)
သင့်လျှာကိုသွားကြားမှာ (ဖွဖွလေး) ကိုက်ထားပြီး စကားပြောကြည့်ပါ။ တစ်လုံးမှမပြောနိုင်ဘူး မဟုတ်လား? ဒါကြောင့် ကိုယ့်လျှာကိုယ်ပြန်ကိုက်ထားလို့ပြောခြင်းက တိတ်တိတ်နေပါလို့ ပြောခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “အသံမထွက်နိုင်အောင်လျှာကို ငြိမ်ငြိမ်လေးထားပါ” လို့ဆိုလိုတယ်။ ပြောချင်တာကို မပြောမိအောင် မနည်းအောင့်အီးထားရတယ်၊ စကားလုံးတွေကို မြိုချလိုက်တယ် လို့လည်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
E.g. I wanted to tell him exactly what I thought of him, but I had to bite my tongue.
သူ့အပေါ် ငါ့အမြင်ကို ပြောပြလိုက်ချင်ပေမဲ့ မပြောမိအောင် မနည်းအောင့်အီးလိုက်ရတယ်။
၁၁။ Putasock in it (အဲဒီထဲ ခြေအိတ်တစ်ဖက်ထည့်လိုက်ပါ)
ဆိုလိုတာကတော့ ခြေအိတ်တစ်ဖက်ကို အသံထွက်နေတဲ့ (ပါးစပ်စသည်) ထဲမှာ သွပ်ထည့်ထားပါက ဘာမျှမပြောနိုင်ပဲ တိတ်တိတ်နေရမှာ အသံတိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကို “Putasock in it” လို့ပြောခြင်းသည် “ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်းပါ” လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
E.g. Hey, putasock in it, will you? I'm trying to work here.
ဟေ့၊ ပါးစပ်ပိတ်ထားကွာ။ ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။
၁၂။ Let sleeping dogs lie (အိပ်နေတဲ့ခွေးတွေကို အသာထားလိုက်ပါ)
ရန်ဖြစ်ပြီးကာစ ခွေးနှစ်ကောင် သွားဆွရင် ဆူဆူညံညံပြန်ဖြစ်မယ်လေ။ ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးပါစေ။ အနာဟောင်း၊ ပြဿနာဟောင်းကို မဆွပါနဲ့၊ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေတဲ့ အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
E.g. Don’t ask him again. It’s better to let sleeping dogs lie.
သူ့ကို ထပ်မမေးနဲ့တော့။ ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေ။
၁၃။ Foam at the mouth (ပါးစပ်မှာ အမြုပ်ထွက်သည်)
(ပါးစပ်မှအမြုပ်ထွက်ပြီး ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့လူတွေကို ကိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့) ခွေးရူးတစ်ကောင်လိုပဲ ဒေါသတကြီးနဲ့ တရှုးရှုးနဲ့မာန်ဖီနေခြင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ “ဒေါသအမျက် တချောင်းချောင်းထွက်နေခြင်း” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
E.g. Traditionalists, as you would expect, are foaming at the mouth.
သင် ထင်သလိုပါပဲ။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတွေက ဒေါသအလွန်ထွက်နေပါတယ်။
၁၄။ A slap on the wrist (လက်ကောက်ဝတ်ကို တစ်ချက်ရိုက်ခြင်း)
အလွန့်အလွန်ကို ပေါ့လျှော့သောအပြစ်ဒဏ်လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ လက်ကောက်ဝတ်မှာ တစ်ချက်အရိုက်ခံ ရခြင်းသည် သိပ်မနာလှတဲ့အတွက် နောက်ထပ်ဆိုးသွမ်းခြင်းကို တားဆီးရာမရောက်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ “လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ဒဏ်ခတ်ခြင်း” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
E.g. I thought I'd getaslap on the wrist for speeding, but I got fined $1000.
ငါ ကားမောင်းကြမ်းတဲ့အတွက် သက်သက်သာသာ အပြစ်ပေးခံရမယ်ထင်နေတာ ခုတော့ ဒါဏ်ကြေး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တောင် ပေးလိုက်ရတယ်။
၁၅။ You are what you eat (သင်စားသမျှသည် သင်ပဲဖြစ်သည်)
ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “သင်စားသော အစားအစာမှန်သမျှဟာ သင့်ရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးနှင့် ချမ်းသာသုခတို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်” လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟမ်ဘာဂါ အာလူးချောင်းကြော် အစရှိတဲ့အာဟာရမဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာကလွဲလို့ဘာမှမစားရင် သင်ဟာနောက်ဆုံးတော့ မကျန်းမမာနဲ့ အာဟာရချို့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အာဟာရမျှတသော အစားအစာများကို သေသေချာချာစားသင့်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုတဲ့အခါ "You are what you eat" လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။
၁၆။ It’sapiece of cake! (ကိတ်မုန့်လေးတစ်ချပ်ပါ)
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် လွယ်ကူလွန်းတယ်၊ အလွယ်လေးပါ လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကိတ်မုန့်တစ်ချပ်ကို ဘယ်သူမှ ခက်ခက်ခဲခဲစားရတယ် ဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်လား?
E.g. The interview wasapiece of cake.
၁၇။ It takes two to tango (Tango အက ကရန် လူနှစ်ယောက်လိုသည်)
နှစ်ရောက်ကမှရတဲ့ Tango အကကို လူတစ်ယောက်တည်းက၍မရပါ။ ထို့အတူ အငြင်းပွားမှု တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သော် လူနှစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာ တစ်ခုခု (ပုံမှန်အားဖြင့် မကောင်းသော) ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ပါက တစ်ဦး(သို့)တစ်ဖွဲ့တည်းကသာတာဝန် ရှိတာမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦး(သို့)နှစ်ဖွဲ့စလုံး၌တာဝန်ရှိတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
E.g. She may want to argue, but it takes two to tango and I won't stoop to her level.
သူကတော့ အငြင်းအခုန်လုပ်ချင်လုပ်နေမယ် ဒါပေမဲ့ ဒါက ကိုယ်ပါပါမှ ဖြစ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်က သူလုပ်သလိုလိုက်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
၁၈။ Head over heels (ရှေ့ကျွမ်းထိုး၍)
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီး ပျော်ရွှင်မြူးတူးခြင်း လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ “အရူးအမူးဖြစ်တယ်” လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
E.g. We met in 2013, and fell head over heels in love.
ကျွန်မတို့ ၂၀၁၃ ခုနစ်မှာ တွေ့ကြပြီး အရူးအမူးချစ်သွားကြတယ်။
၁၉။ An arm andaleg (လက်တစ်ဖက်ခြေတစ်ဖက်)
တစ်စုံတစ်ခုသည် မတရားဈေးကြီးသောကြောင့် ၎င်းကိုဝယ်နိုင်ရန် ကိုယ့်ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ တောင်မှ ရောင်းရမလိုဖြစ်နေသောအခါ “လက်တစ်ဖက် ခြေတစ်ဖက်တန်တယ်” လို့ တင်စားပြောကြပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ “နင့်နေအောင်ပေးရတယ်” ပေါ့။
E.g. These shoes cost me an arm andaleg.
ဒီရှူးဖိနပ် ဝယ်လိုက်တာ တော်တော်ဘက်ဂျက်ထိသွားတယ်။
Lifehack.org မှ LANA WINTER-HÉBERT ၏ If You’ve Never Used These English Idioms, You’re Probably NotaNative English Speaker ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်ျဂလိပျစကားကို မိခငျဘာသာစကားအဖွဈ သုံးစှဲလာခဲ့သောသူမြားဟာ အီဒီယမျမြားနှငျ့ အီဒီယမျဆနျသော အသုံးအနှုနျးတှနေဲ့ ထိတှပွေီ့းသားဖွဈပါတယျ။ ငယျငယျတုနျးကတော့ ထိုအသုံးအနှုနျးမြားဟာ နညျးနညျးရှုပျထှေးခဲ့ပမေယျ့ အမွဲထိတှနေ့မှေုကွောငျ့ ၄ငျးတို့၏ အဓိပ်ပါယျကို ပိုမိုနားလညျလာရုံမကပဲ မိမိကိုယျတိုငျသုံးပွီး စကားလုံးမြားထဲသို့တောငျ ထညျ့သှငျးသုံးစှဲလာကွပါတယျ။ သငျဟာ အင်ျဂလိပျစာကို သငျယူနလေကျြရှိနတေယျဆိုရငျတော့ ဒီ အီဒီယမျတှကေို ကွုံတှရေ့မှာဖွဈပွီး အဓိပ်ပါယျကို သသေခြောခြာနားလညျခငျြမှ နားလညျမှာဖွဈပါတယျ။ native speaker မြားနဲ့ ပွောဆိုတဲ့အခါမှာ မကွာခဏကွုံတှနေို့ငျတဲ့ အီဒီယမျမြားကို အောကျမှာဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ A chip on your shoulder (ပခုံးပျေါကအပဲ့လေး)
To haveachip on one’s shoulder ဆိုတာကတော့ တဈဦးတဈယောကျက အတိတျမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အညိုးအတေး (သို့) မကောငျးတဲ့ စိတျခံစားမှုတဈခုခုရှိနတောကိုပွောတာပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ငယျငယျတုနျးက မိဘမဲ့ဖွဈခဲ့လို့ စိတျဒဏျရာရနတောမြိုး၊ ခြို့ယှငျးခကျြတဈခုခုကွောငျ့ အငွိုးရှိတာမြိုးပါ။
Bert သညျ သူ၏ စကားဝဲသံကွောငျ့ အမွဲစိတျသိမျငယျနတေတျခဲ့သညျ။
၂။ Bite off more than you can chew (ဝါးနိုငျတာထကျပိုကိုကျခွငျး)
အသားညှပျပေါငျမုနျ့ကို ခပျကွီးကွီး တဈကိုကျကိုကျလိုကျတဲ့အခါ ပါးစပျတဈခုလုံးပွညျ့သှားပွီးတော့ မေးရိုးတှတေောငျ မလှုပျနိုငျတော့သလိုမြိုးပေါ့။ ဒီ အီဒီယမျကတော့ ကိုယျ ပွီမွောကျအောငျမွငျအောငျ လုပျနိုငျတာ ထကျပိုပွီး တာဝနျယူထားတာကိုပွောခငျြတာပါ။ ဥပမာအနနေဲ့ကတော့ တဈပါတျအတှငျးမှာ ဝကျဗျဆိုဒျ ၁၀ ခု ကိုပွီးအောငျ လုပျပေးမယျဆိုတာမြိုးပေါ့။ တကယျတမျးတော့ သငျလုပျနိုငျတာက ၅ ခုပဲလေ။
ဒီအလုပျနဲ့ ပတျသကျပွီး မငျးလုပျနိုငျတာထကျပိုပွီး လကျခံလိုကျမိပွီလို့ မထငျဘူးလား။
၃။ You can’t take it with you (ကိုယျနှငျ့အတူယူသှား၍မရနိုငျပါ)
သုံးနိုငျတုနျး သုံးထားလိုကျ၊ စားနိုငျတုနျးစားထားလိုကျ ဆိုသညျ့ သဘောဖွဈပါသညျ။ သငျသဆေုံးသှားတဲ့အခါ ဘာကိုမှ သငျနှငျ့သယျသှားလို့မရနိုငျပါ။ ဒါကွောငျ့ မိမိပိုငျပစ်စညျးတှကေို တောငျပုံယာပုံ စုဆောငျးသိမျးဆညျးထားခွငျး၊ ထူးမွတျတဲ့အခြိနျအခါမြိုးမှာမှ ထုတျသုံးတာကလှဲလို့ ကနျြအခြိနျမြားမှာ သိမျးထားခွငျးတို့ကို မပွုလုပျပါနဲ့။ အခုအခါမှာ ဘ၀ကိုဇိမျကကြနြဲ့ အဓိပ်ပါယျရှိရှိ အသကျရှငျနထေိုငျပါ။ သငျလောကကွီး ထဲကထှကျသှားပွီးတဲ့နောကျမှာ သငျ့ပစ်စညျးတှကေ အကွာကွီး ဆကျပွီးကနျြခဲ့မှာ ဖွဈပါသညျဟု ဆိုလိုသညျ့အခါ "you can't take it with you" ကို သုံးနိုငျပါသညျ။
ငှတှေေ ပစ်စညျးတှကေို သငျ အသကျရှငျနစေဉျ သုံးစှဲစညျးစိမျခံစားပါ။ သရေငျ သငျ့နောကျပါလာမှာ မဟုတျဘူးလေ။
၄။ Everything but the kitchen sink (မီးဖိုခြောငျလကျဆေးကနျမှလှဲ၍)
အကုနျလုံးနီးပါးထုပျပိုးပွီး/ယူသှားပွီး/ရှပွေ့ောငျးပွီး ဖွဈတယျ။ အားလုံးနီးပါးလို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ တဈယောကျယောကျက “The thieves stole everything but the kitchen sink!” လို့ပွောရငျ သူခိုးတှကေဟာ သယျလို့ရတဲ့ ပစ်စညျးမှနျသမြှကို တကျတကျပွောငျအောငျခိုးသှားတယျ”လို့ပွောတာပါ။ လကျဆေးကနျကတော့ ဖွုတျပွီးသယျသှားဖို့ရာခကျတယျလေ။ ''တဈပုံတဈခေါငျးကွီး''လို့လဲအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုနိုငျပါတယျ။
ငါတို့က တဈပတျပဲ အပြျောခရီးထှကျမှာကို John က ပစ်စညျးရှိသမြှ အကုနျလုံးပါ သယျသှားခငျြနလေရေဲ့။
၅။ Over my dead body (သနေတေဲ့ ငါ့ကိုယျခန်ဒာကိုယျပျေါက)
ကိစ်စတဈခုခုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ကနျ့ကှကျသော သဘောကိုဆောငျပါတယျ။ မွနျမာစကားတှငျ “ငါသမှေလုပျ” ဟူသော စကားနှငျ့ နီးစပျပါသညျ။
Joe က ဆိုငျကယျဝယျစီးမယျပွောနတေယျ။
၆။ Tie the knot (လကျထပျသညျ)
တိုကျရိုကျဘာသာပွနျရငျ "အထုံးထုံးတယျ" လို့ ဆိုလိုပမေဲ့ တကယျ့ အဓိပ်ပါယျက “လကျထပျတယျ” လို့ ဆိုလိုတာဖွဈပါသညျ။ ဒီစကားကတော့ ရှေးရိုးအစဉျအလာဖွဈတဲ့ “handfasting” (လကျမြားခညျြနှောငျခွငျး) ဆိုတဲ့စကားက ဆငျးသကျလာတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ မင်ျဂလာဆောငျတဲ့ အခြိနျမှာ သတို့သားနှငျ့ သတို့ သမီးတို့၏ လကျတှကေို အတူတူဖဲကွိုးနဲ့ခညျြနှောငျပွီး “သူတို့နှဈဦးရဲ့ဘ၀တှဟော ထာဝရခညျြနှောငျပွီး သှားပွီ” ဆိုတဲ့ အထိမျးအမှတျဖွဈပါတယျ။
ကဲ ဒီတော့ မငျးတို့နှဈယောကျဘယျတော့ မင်ျဂလာဆောငျကွမှာလဲ။
၇။ Don’t judgeabook by its cover (စာအုပျကို အဖုံးကွညျ့ပွီး အကဲမဖွတျပါနှငျ့)
တဈစုံတဈယောကျ (သို့) တဈစုံတဈခုကို အပျေါယံ အမွငျမြှနဲ့ အတှငျးသဏ်ဏ္ဍာနျ၊ အရညျအသှေးကို မှနျးဆလို့ မရကွောငျး ဆိုလိုပါတယျ။ မွနျမာစကားပုံ အပှေးမွငျ အပငျသိဆိုတာနဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
သူ့ကို ကွညျ့ရတာတော့ သိပျတျောပုံမရဘူး ဒါပမေဲ့ အမွငျနဲ့တော့ ဆုံးဖွတျလို့မရဘူးလေ။
၈။ When pigs fly (၀ကျတှပြေံသနျးသောအခါ)
အဓိပ်ပါယျကတော့ “ဘယျသောအခါမှ” ဖွဈပါတယျ။ ၀ကျတှဟော ဘယျတော့မှ အတောငျပေါကျပွီး ပြံသနျးမှာမဟုတျပါ။ ဒါကွောငျ့ မိဘတဈဦးက သူ့ကလေးတဈယောကျယောကျကို “၀ကျတှပြေံသနျးတဲ့အခါမှ မငျးနဖူးမှာ ဆေးမငျကွောငျထိုးခှငျ့ပွုမယျ” လို့ပွောတာက “ဒီကိစ်စကတော့ ဘယျတော့မှဖွဈလာမှာမဟုတျဘူ” လို့ ပွောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။
၉။ Leopard can’t change his spots (ကြားသဈက သူ့ခန်ဒာကိုယျကအပွောကျတှကေို ပွောငျးပဈလို့ မရပါ)
အဓိပ်ပါယျကတော့ “သငျဟာသငျပါပဲ”လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ကြားသဈတဈကောငျဟာ ဘယျလိုမှ သူ့ရဲ့အရပွေားကပုံစံကို ပွောငျးလဲမရနိုငျသလိုပဲ လူတှရေဲ့အတှငျးစိတျကလညျး ဘယျလိုမှ ပွောငျးလဲမရနိုငျပါ။ မွနျမာစကားပုံ ခှေးမွီးကောကျ ကညျြတောကျစှပျနဲ့ ဆငျပါတယျ။
ဒီလို ဒာဏျပေးတာက Chris ကို သငျခနျးစာရစမေယျတော့မထငျပါဘူး။ ခှေးမွီးကောကျ ကညျြတောကျစှပျပဲလေ။
၁၀။ Bite your tongue! (ကိုယျ့လြှာကိုယျပွနျကိုကျ)
သငျ့လြှာကိုသှားကွားမှာ (ဖှဖှလေး) ကိုကျထားပွီး စကားပွောကွညျ့ပါ။ တဈလုံးမှမပွောနိုငျဘူး မဟုတျလား? ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့လြှာကိုယျပွနျကိုကျထားလို့ပွောခွငျးက တိတျတိတျနပေါလို့ ပွောခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ တိုကျရိုကျအဓိပ်ပါယျကတော့ “အသံမထှကျနိုငျအောငျလြှာကို ငွိမျငွိမျလေးထားပါ” လို့ဆိုလိုတယျ။ ပွောခငျြတာကို မပွောမိအောငျ မနညျးအောငျ့အီးထားရတယျ၊ စကားလုံးတှကေို မွိုခလြိုကျတယျ လို့လညျးအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆို ဖျောပွနိုငျပါတယျ။
သူ့အပျေါ ငါ့အမွငျကို ပွောပွလိုကျခငျြပမေဲ့ မပွောမိအောငျ မနညျးအောငျ့အီးလိုကျရတယျ။
၁၁။ Putasock in it (အဲဒီထဲ ခွအေိတျတဈဖကျထညျ့လိုကျပါ)
ဆိုလိုတာကတော့ ခွအေိတျတဈဖကျကို အသံထှကျနတေဲ့ (ပါးစပျစသညျ) ထဲမှာ သှပျထညျ့ထားပါက ဘာမြှမပွောနိုငျပဲ တိတျတိတျနရေမှာ အသံတိတျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့တဈစုံတဈယောကျကို “Putasock in it” လို့ပွောခွငျးသညျ “ပါးစပျပိတျထားစမျးပါ” လို့ပွောတာနဲ့အတူတူပဲဖွဈပါတယျ။
ဟေ့၊ ပါးစပျပိတျထားကှာ။ ဒီမှာ အလုပျလုပျနတေယျ။
၁၂။ Let sleeping dogs lie (အိပျနတေဲ့ခှေးတှကေို အသာထားလိုကျပါ)
ရနျဖွဈပွီးကာစ ခှေးနှဈကောငျ သှားဆှရငျ ဆူဆူညံညံပွနျဖွဈမယျလေ။ ပွီးခဲ့တာတှေ ပွီးပါစေ။ အနာဟောငျး၊ ပွဿနာဟောငျးကို မဆှပါနဲ့၊ အေးအေးဆေးဆေးဖွဈနတေဲ့ အတိုငျးပဲထားလိုကျပါလို့ ဆိုလိုပါတယျ။
သူ့ကို ထပျမမေးနဲ့တော့။ ပွီးခဲ့တာတှပွေီးပါစေ။
၁၃။ Foam at the mouth (ပါးစပျမှာ အမွုပျထှကျသညျ)
(ပါးစပျမှအမွုပျထှကျပွီး ဟိုပွေးဒီပွေးနဲ့လူတှကေို ကိုကျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့) ခှေးရူးတဈကောငျလိုပဲ ဒေါသတကွီးနဲ့ တရှုးရှုးနဲ့မာနျဖီနခွေငျးလို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ ဆိုလိုခငျြတာကတော့ “ဒေါသအမကျြ တခြောငျးခြောငျးထှကျနခွေငျး” ပဲဖွဈပါတယျ။
သငျ ထငျသလိုပါပဲ။ ရှေးရိုးစှဲဝါဒီတှကေ ဒေါသအလှနျထှကျနပေါတယျ။
၁၄။ A slap on the wrist (လကျကောကျဝတျကို တဈခကျြရိုကျခွငျး)
အလှနျ့အလှနျကို ပေါ့လြှော့သောအပွဈဒဏျလို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ လကျကောကျဝတျမှာ တဈခကျြအရိုကျခံ ရခွငျးသညျ သိပျမနာလှတဲ့အတှကျ နောကျထပျဆိုးသှမျးခွငျးကို တားဆီးရာမရောကျပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ “လြှော့လြှော့ပေါ့ပေါ့ ဒဏျခတျခွငျး” ပဲဖွဈပါတယျ။
ငါ ကားမောငျးကွမျးတဲ့အတှကျ သကျသကျသာသာ အပွဈပေးခံရမယျထငျနတော ခုတော့ ဒါဏျကွေး ဒျေါလာ ၁၀၀၀ တောငျ ပေးလိုကျရတယျ။
၁၅။ You are what you eat (သငျစားသမြှသညျ သငျပဲဖွဈသညျ)
ဆိုလိုခငျြတဲ့အဓိပ်ပါယျကတော့ “သငျစားသော အစားအစာမှနျသမြှဟာ သငျ့ရဲ့အထှထှေကေနျြးမာရေးနှငျ့ ခမျြးသာသုခတို့အပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိတယျ” လို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဟမျဘာဂါ အာလူးခြောငျးကွျော အစရှိတဲ့အာဟာရမဖွဈစတေဲ့ အစားအစာကလှဲလို့ဘာမှမစားရငျ သငျဟာနောကျဆုံးတော့ မကနျြးမမာနဲ့ အာဟာရခြို့တဲ့သူတဈဦးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ အာဟာရမြှတသော အစားအစာမြားကို သသေခြောခြာစားသငျ့ပါတယျလို့ တိုကျတှနျးပွောဆိုတဲ့အခါ "You are what you eat" လို့ ပွောတတျကွပါတယျ။
၁၆။ It’sapiece of cake! (ကိတျမုနျ့လေးတဈခပျြပါ)
မယုံကွညျနိုငျလောကျအောငျ လှယျကူလှနျးတယျ၊ အလှယျလေးပါ လို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ ကိတျမုနျ့တဈခပျြကို ဘယျသူမှ ခကျခကျခဲခဲစားရတယျ ဆိုတာမရှိဘူးမဟုတျလား?
၁၇။ It takes two to tango (Tango အက ကရနျ လူနှဈယောကျလိုသညျ)
နှဈရောကျကမှရတဲ့ Tango အကကို လူတဈယောကျတညျးက၍မရပါ။ ထို့အတူ အငွငျးပှားမှု တဈခုခုဖွဈခဲ့သျော လူနှဈဦးပါဝငျပတျသကျခဲ့တဲ့အတှကျ နှဈဦးနှဈဖကျတာဝနျရှိတယျလို့ ဆိုလိုခွငျးဖွဈပါတယျ။ ပွဿနာ တဈခုခု (ပုံမှနျအားဖွငျ့ မကောငျးသော) ကိစ်စတဈခုခုဖွဈခဲ့ပါက တဈဦး(သို့)တဈဖှဲ့တညျးကသာတာဝနျ ရှိတာမဟုတျဘဲ နှဈဦး(သို့)နှဈဖှဲ့စလုံး၌တာဝနျရှိတာကို ဆိုလိုပါတယျ။
သူကတော့ အငွငျးအခုနျလုပျခငျြလုပျနမေယျ ဒါပမေဲ့ ဒါက ကိုယျပါပါမှ ဖွဈတာဆိုတော့ ကြှနျတျောက သူလုပျသလိုလိုကျလုပျမှာ မဟုတျဘူး။
၁၈။ Head over heels (ရှကြေှ့မျးထိုး၍)
မယုံကွညျနိုငျလောကျအောငျ အလှနျအမငျးစိတျလှုပျရှားပွီး ပြျောရှငျမွူးတူးခွငျး လို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျပေါ့။ ဆိုလိုခငျြတာကတော့ “အရူးအမူးဖွဈတယျ” လို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ကြှနျမတို့ ၂၀၁၃ ခုနဈမှာ တှကွေ့ပွီး အရူးအမူးခဈြသှားကွတယျ။
၁၉။ An arm andaleg (လကျတဈဖကျခွတေဈဖကျ)
တဈစုံတဈခုသညျ မတရားဈေးကွီးသောကွောငျ့ ၎င်းငျးကိုဝယျနိုငျရနျ ကိုယျ့ခန်ဒာကိုယျအစိတျအပိုငျးမြား တောငျမှ ရောငျးရမလိုဖွဈနသေောအခါ “လကျတဈဖကျ ခွတေဈဖကျတနျတယျ” လို့ တငျစားပွောကွပါတယျ။ ပွောရရငျတော့ “နငျ့နအေောငျပေးရတယျ” ပေါ့။
ဒီရှူးဖိနပျ ဝယျလိုကျတာ တျောတျောဘကျဂကျြထိသှားတယျ။
Lifehack.org မှ LANA WINTER-HÉBERT ၏ If You’ve Never Used These English Idioms, You’re Probably NotaNative English Speaker ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Nay Lynn on June 3, 2015 at 18:39
I like that. I would like to learn most commonly used phrasal verbs, idioms and slangs. Thank you.
Permalink Reply by Aung Win Naing on June 3, 2015 at 22:41
Permalink Reply by chit thet on June 4, 2015 at 10:07
Permalink Reply by Myo Myo Htun on June 4, 2015 at 10:45
I was afraid to use idioms in speaking and I even couldn't explain what I used.
By gettingachance to read in Burmese with well explanations, I get confident to use idioms.
Permalink Reply by Wai Yan on June 8, 2015 at 16:32
Permalink Reply by moonsweet hsel on June 10, 2015 at 13:07
Permalink Reply by Than Zaw on June 14, 2015 at 21:44
Permalink Reply by Chit Lwin on June 14, 2015 at 22:05
Permalink Reply by Zun Moe Pwint on October 17, 2015 at 22:09
Permalink Reply by U Aung Kyaw on September 11, 2016 at 6:27